अविरल यात्रा: समीक्षा
सपना बीच रातमा ब्युँझी मलाई खोज्दी हो । (सयपत्री र मखमली, पृष्ठ ः २७)
कृतिगत विशेषताः–गीतकार केदार श्रेष्ठ ‘गगन’ को ‘क्षितिज पर’ गीत संग्रह मार्फत्.....
विश्वको छानो सगरमाथालाई नबनाऊ होचोआफैँ,
आफैँ फुटेर किन बनाउनु देशलाई खोटो । (हामी एउटै, पृष्ठ ः २८)
यौवनको भेलले लान लाग्यो मलाई कोही बचाइदेऊ ।(बैँशालु बाढी, पृष्ठ ः ३०)
दुबै मिली रोपेका ती ठूला भए वरपीप
लबल गरेर हुन्न रै’छ मायाप्रीति सफल ।(मनभित्रका छालहरू, पृष्ठ ः ३०)
फर्की आऊ चाँडै घर आफ्नो खोरियाबारी खन्न ।( फर्की आउनू, पृष्ठ ः ३४)
बेचैन छ मन मेरो निष्ठुरीले बाटो मोडिदिँदा ।(फुलेको फूल, पृष्ठ ः ३३)
मुलुकको चौतर्फी पक्षको समुन्नतिमा देशका हर्ताकर्ता नलागीकन पूरातनवादी यथास्थितिलाई नै मलजल गर्दै हिंडे भने विद्रोहका हातहरू उठ्नेछन् । परिवर्तनको गीत गाउँने गायकहरू थपिनेछन् । चट्टानझैं शक्तिशाली छाती पारेर युगौंदेखिको पुरानो पर्दा च्यातचुत पार्नेछन् । यस महाअभियानको बाटामा तगारो बन्नेहरूले प्रायश्चित गर्ने शब्द र भाग्ने बाटाहरू पाउनेछैनन् । स्वार्थको घैला भर्नेहरू धेरै छन् समाजमा । तिनीहरूको मुखमा बुझो लगाउन पनि हार स्वीकार्नु हुन्न । समाजमा त्यस्ता विकृत स्वरूपको मुखमा कालोमोसो दलेर विजयोत्सव मनाउने कार्यतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ । अहिले बलियो कानृ्नको अभाब भएको यो अवस्थामा सामन्तहरूले मनपर्दी शोषण गरिरहेका छन् । आधा आकाश ढाकेका भनिएका अर्थात् आधा धर्ती ओगटेर रहेका महिलाहरू झन् पितृसत्तात्मक शोषणको जाँतोमुनि पिसिँंदै आएका छन् र मुक्तिसंग्राममा खरो गरी उत्रने जमर्को गरिरहेछन् । हिमाल, पहाड र तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने दलितहरू मनुवादी छुवाछुत प्रथाबाट र मुस्लिमहरू हिन्दू लगायत अन्यको धार्मिक अहङ्कारवादबाट पीडित छन् । तराई र पहाडले कर्णाली, सेती–महाकाली र हिमाली भेगमा बसोवास गर्नेहरूको चरम क्षेत्रीय उत्पीडनलाई बुझिदिन सकेका छैनन् । ‘तिमीभित्र जुन चेतना छ, त्यसको अविर्भाव नै धर्म हो । तिमीभित्र जुन बोध छ, त्यसकै प्रज्ज्वलित हुनु धर्म हो । धर्म आन्तरिक क्रान्ति हो । धर्मबाट निरपेक्ष हुनुको अर्थ हो, मानिस सत्यबाट निरपेक्ष हुनु । राजनीतिलाई धर्म निरपेक्ष बनाएकै कारण राजनीति झुटको खेती बन्न पुगेको छ ।’ भनेर दार्शनिक ओशोले राजनीति सप्रदा सबै कुरा ठीक हुने कुराको संकेत गरेका छन् । राजनीतिले अहंकार थपिदिन सक्छ, धोका दिन सक्छ । प्रेममा धोका पाएकाहरूको भने मनको पीडा गीतले राम्ररी व्यक्त गर्छ । प्रेममा धोका पाएकाहरूका लागि अतित अति प्रिय हुन्छ । अतितलाई सम्झेर वर्तमानमा ज्युनु नै दिनचर्या हुन जान्छ ।बिर्सनेलाई सम्झीसम्झी मन उढी उतै जान्छकल्पनाले तान्दैतान्दै अतिततिर लान्छ । (भूतपूर्व मायालु, पृष्ठ ः ३७) हामी तर्सन्छौँ । प्राण प्रिय ठानेर नानाभाँती गछौँ । तर त्यही प्राणलाई जीवन्त राख्न भुसुक्कै भुल्छौँ । यसै सवालमा दार्शनिक ओशोको कथन छ– ‘मृत्यु छँदै छैन । मृत्यु एउटा झुट हो । मात्र भ्रान्ति हो । तिमी बच्चा थियौ, तन्नेरी भयौ । त्यो बच्चा कहाँ गयो ? मर्यो ? तन्नेरी थियौ, अब बूढो भयौ । त्यो तन्नेरी कहाँ मर्यो त ? जसरी मानिसको उमेरअनुसार रूप परिवर्तन हुँदै जान्छ, मृत्यु पनि रूप परिवर्तन मात्र हो । शरीरबाट आत्मा अलग हुने प्रक्रिया मात्र हो । शरीर पहिलेदेखि नै मृत हो, अब मृतको कसरी मृत्यु हुन्छ ? आत्मा अमृत हो । अब अमृत त कहिल्यै मर्ने कुरा आएन । भनेपछि यहाँ मृत्यु कतै छैन ।’ यसरी दुःख पनि छैन, मृत्यु पनि छैन । तसर्थ किन समुद्धशाली भएर यो दुःखको अध्यायको अन्त नगर्ने ? अब एउटा यस्तो अध्यायको कुरा गरौँ कि जुन अध्याय हामीले कहिल्यै सुरुवात गर्नै पाएका थिएनौँ । त्यस्ता अध्याय सुरु गर्नेहरू विश्वमा औँलामा गन्न सकिने अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई दुनियाँ जगत्को लोभ–लालच, ईष्र्या–द्धेष, अहंकार–पाखण्ड आदित्यादिको त्यत्रो प्रवाह छैन । जरुरतको महसुस पनि छैन । श्रम नै ईश्वर हो, सुख हो, शान्ति हो, कान्ति हो र जीवनको सम्पूर्णता हो । यही र यस्तै भावनाले ओतप्रोत छन् उनीहरू । ईष्र्या र अहंकार कुन चरीको नाम हो त्यस पुस्ताले बिर्सेको छ । ‘पुरुष एक प्रकारको सतह हो, जहाँ सक्रियता छ, आँधीतुफान छ । स्त्री एक गहन गहिराइ हो, जहाँ सबै मौन र शान्त छ । तर ख्याल रहोस् पुरुषको जुन सक्रियता छ, स्त्रीको त्यही गहिराइको माथिल्लो हिस्सा हो । त्यसैले म भन्छु, स्त्री केन्द्रमा छ, पुरुष परीधिमा छ ।’ भन्ने दार्शनिक ओशो कथन सम्झदै पुरुषस्त्री दुबैको देनबाट नै हामी समृद्धशाली बनेर आफ्नो गन्तब्यमा पुग्न सक्छौँ । हुनुपर्ने हो यस्तो तर विदेशी सागरको मोती खोज्दा विचल्नीमा पर्नु परेको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 11:02 PM
मेरा प्रकाशित पुस्तकहरु
प्रकाशक-अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज यूएई च्याप्टर
केदार श्रेष्ठ गगन